lower abdominal exercises: benefits of honey ginger
benefits of honey ginger Shaah Green ama shaah cagaar , wuxuu noqday mid ka mid ah cabitaan caanka ku baabba'nay, da 'kasta . Got faa'iidooyinka caafimaad iyo quruxdiisa in lagu cadeeyay ah , ilaa dhawaan waxbarasho militery ah a ah ee sharaabka maalin walba .
Faa'iidooyinka shaaha cagaaran marka malab la isku daray sida ay yihiin ya ?
Shaah Green qaso malab halkii waxtarka ugu fiican . Waxaa intaa dheer , uma baahnid in aad ku darto sonkorta iyo macaan dabiiciga ah ee malab .
Sida lagu sheegay Boldsky.com , haddii ay tahay faa'iidooyinka shaaha cagaaran qaso malab .
Hagaajinta shaqo maskaxda
Ma aha oo kaliya tixagalino Dabcan , shaah cagaar sidoo kale ay hagaajin kartaa shaqo maskaxda . Joogitaanka caffeine hooseeyo ee shaah cagaar ka dhigi aad joogtid cusub dheer . Dheeriga ah ee malab waxaa ku jira intaa dheer , waxay hagaajin doontaa shaqo maskaxda . Labada caawin diiradda si wanaagsan iyo ka-fiirsashada iyo sidoo kale lagu hayo niyaddaada .
Dadka intooda badan doonayaan in ay cunaan ama cabbaan wanaagsan dhadhanka laakiin waqti isku mid ah ku gubi baruurta . Waxaa laga yaabaa in waxa run ah ? Warka wanaagsani waa waxa suurto gal ah . Haddii aad soo dhiga shaaha cagaaran iyo dar malab waxaa ku jira oo baabbi'in doontaa si joogto ah , markaa isku dhafan ee ku ool ah ku gubi doonaa kaloori ee jirka si ay baruurta jirka waxaa hoos u .
Ka hortagga kansarka
Iyaga oo barax- cabbitaan ah hodan ku leeyihiin antioksidant hagaajin kartaa unugyada jidhka oo ay ka hortagi waadhka cudurka kansarka ah .
Waxaa jira katychenz in shaah cagaar , marka ay la malab la isku daray ayaa sidoo kale ka hortagi kara formation of huurada iyo bakteeriyada xun riixida afka . Tani waa sababta aad ilkaha u noqdaan caafimaad leh iyo xoog .
Khatartu of osteoporosis aan la baajin karin . Haddii aanad qof kuwaas oo jecel waxyaabaha caanaha laga , ka dibna aad ku baabbi'iyee kartaa shaah cagaar leh Haatuf malab ah si looga hortago lafo carqaladeeyo caafimaadkaaga .